" လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက်ထဲကဖန်တီးထားတဲ့music video လေးကို လတ်တလော ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့် ပြန်လည်သီဆိုဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်'' - Cele Gabar
Home/Cele News/” လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက်ထဲကဖန်တီးထားတဲ့music video လေးကို လတ်တလော ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့် ပြန်လည်သီဆိုဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်”
” လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက်ထဲကဖန်တီးထားတဲ့music video လေးကို လတ်တလော ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့် ပြန်လည်သီဆိုဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်”
Koe2weeks ago	Cele News
လက်ရှိမှာလည်း”ဒီသီချင်းလေးက လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက်ကတည်းက ရိုက်ထားပြီးမတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးပါ. . . ခံစားချက်ကြောင့် ပြန်အသက်သွင်း သီဆိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေ..
အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာပါခဲ့ရင်လည်း အားလုံးကိုကြိုတောင်းပန်ပါတယ်နော် 🙏🏻(နားကြပ်လေးတပ်ပြီး နားဆင်ခံစားပေးနော်… )❤️”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ သူမရဲ့သီချင်းသစ်လေးကို တင်လာခဲ့တာပါ။
သူမရဲ့သီချင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့”အရမ်းလွမ်းနေပြီ”သီချင်းMusic videoထဲမှာ သူမရဲ့ညီ​မဖြစ်သူ သူဇာဝင့်လွင်လည်းပါဝင်ထားတာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်းမေရဲ့သီချင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်ရင် မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
” လြန္ခဲ့တဲ့ေျခာက္လေလာက္ထဲကဖန္တီးထားတဲ့music video ေလးကို လတ္တေလာ ခံစားခ်က္နဲ႔တိုက္ဆိုင္ေနတာေၾကာင့္ ျပန္လည္သီဆိုဖန္တီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေမရဲ႕ဗီဒီယိုဖိုင္”
လက္ရွိမွာလည္း”ဒီသီခ်င္းေလးက လြန္ခဲ့တဲ့ေျခာက္လေလာက္ကတည္းက ႐ိုက္ထားၿပီးမတင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေလးပါ. . . ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ ျပန္အသက္သြင္း သီဆိုျဖစ္သြားတယ္ေပါ့ေလ..
အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ရာပါခဲ့ရင္လည္း အားလုံးကိုႀကိဳေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္ 🙏🏻(နားၾကပ္ေလးတပ္ၿပီး နားဆင္ခံစားေပးေနာ္… )❤️”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔အတူ သူမရဲ႕သီခ်င္းသစ္ေလးကို တင္လာခဲ့တာပါ။
သူမရဲ႕သီခ်င္းအသစ္ျဖစ္တဲ့”အရမ္းလြမ္းေနၿပီ”သီခ်င္းMusic videoထဲမွာ သူမရဲ႕ညီ​မျဖစ္သူ သူဇာဝင့္လြင္လည္းပါဝင္ထားတာပါ။ CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္းေမရဲ႕သီခ်င္းေလးကိုနားေထာင္ၿပီးခံစားခ်က္နဲ႔တိုက္ဆိုင္ရင္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous ” ကမ်းခြေမှာ နတ်သမီးလေးတစ်ပါး နတ်သက်ကြွေကျလာသရောင်ထင်ရလောက်တဲ့ထိ အဖြူရောင်ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ”
Next ” မြန်မာနိုင်ငံထဲက လည်ပတ်ချင်စရာကောင်းတဲ့ ” ဂွ ”Beach ကို သွားရောက်ခဲ့ကြောင်းအမိုက်စား Vlog လေးရိုက်ကူးကာ တင်လာခဲ့တဲ့ ခင်ရူပ”